देशभर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु, तपाईंको पालो कहिले ?
माघ १४, २०७७ १०:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल विधि मार्फत देशभर खोप अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
अभियान सुरु भएसँगै तोकिएका अस्पताल, स्वास्थ्यसंस्था र खोप केन्द्रमा खोप लगाउने क्रम चलिरहेको छ । पहिलो चरणमा यस अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, शव व्यवस्थापक, महिला स्वास्थ्य स्वयमेसेविका, एम्बुलेन्स चालक, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई दिइनेछ ।
कोरोनाको पहिलो खोप लिएका डाक्टरहरु,
कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी र दोस्रो खोप पहिलो कोरोना संक्रमितदेखि अहिलेसम्म कोरोनाका बिरामी हेरिरहनु भएका अस्पतालका प्रमुख कन्सलटेन्ट डा. अनुप बाँस्तोलाले लगाउनुभएको छ ।
गत वर्षको पुस २९ गते नेपालमा कोरोना भित्रिए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माघ ९ गते त्यसको जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयले पहिलो कोरोना संक्रमितबारे जानकारी गराउँदा संक्रमित उपचार गरी डिस्चार्ज हुनु भइसकेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा ४ लाख ३० हजार फ्रन्टलाइनरले खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सहित ६२ वटा अस्पताल र १२० वटा खोप केन्द्रबाट खोप अभियानको सुरु भएको हो ।
यस अभियानमा भारतले अनुदानमा उपलव्ध गराएको सिरम इन्टिच्यूट अफ इन्डियाले निर्माण गरेको कोभिशिल्ड लगाइनेछ । यो खोप दुई मात्रा लगाइनेछ । सुरुमा लगाएको ४ हप्तापछि दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
कोभिशिल्ड १८ वर्ष उमेर माथिका व्यक्तिहरुलाई लगाइनेछ । गर्भवती,स्तानपान गराइरहेकी महिला, तत्काल गर्भाधारणको योजना बनाएका महिला, एलर्जीको समस्या भएका व्यक्तिहरुले कोरोनाको खोप लगाउन हुँदैन।
काठमाडौं उपत्यकाका खोप सुरु भएका अस्पतालहरु :